Agaro Oligosaccharide Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide dia manana hetsika biolojika manokana, toy ny anti-oxidation, anti-inflammation, anti-virus ary ny fisorohana ny colitis, sns. amin'ny fenitra nasionaly sy ny EU. Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide dia karazana oligose manana mari-pahaizana polymerization (DP) 2 ~ 12 aorian'ny hydrolysis, izay ambany vis ...
Ny agar-dranon'ny Fujian Global Ocean dia mampiasa ny ahidrano sy ny ahidrano sinoa toy ny akora, izay akora voajanahary nalaina avy amin'ny ahidrano miaraka amin'ny fomba siantifika. Ny agar dia karazana kôlôla hydrofilika, izay tsy mety levona anaty rano mangatsiaka fa mora levona anaty rano mangotraka ary levona miadana ao anaty rano mafana. Ny agar faobe any amin'ny Ranomasimbe Fujian dia afaka mamorona gel tsy miovaova, ambanin'ny 1%, noho izany dia iray amin'ireo akora ilaina amin'ny indostrian'ny sakafo. Mety ho fampiharana tsara kokoa ...
Agarose dia polymer linear izay ny firafitra fototra dia kofehy lava mifandimby 1, 3-mifandray β-D-galactose ary 1, 4-mifandray 3, 6-anhydro-α-L-galactose. Matetika ny agarose dia levona anaty rano rehefa mafana hatramin'ny 90 ℃, ary lasa gel semi-solid tsara rehefa midina hatramin'ny 35-40 ℃ ny maripana, izay ny endri-javatra sy fototry ny fampiasana azy marobe. Ny fananan'ny gel agarose dia matetika maneho amin'ny tanjaka gel. Arakaraka ny maha avo ny tanjaka no mahatsara ny fahombiazan'ny gel. Agarazy madio dia mahery ...
Carrageenan Fujian Global Ocean kappa carrageenan voadio dia voaomana avy amin'ny ahidrano mena - Eucheuma, avy amin'ny ɑ (1-3) -D-galactose-4-sulfate sy β (1-4) 3,6-tsy fahampian-drano-D antsasaky ny vondron'orinasa sulfate Partial lactose. Ny vokatra dia voahodina ara-tsiansa ary ny kalitaon'ny vokatra dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra sinoa nasionaly sy EU. Toetoetra simika ● Fahafoanana: tsy voarohirohy amin'ny rano mangatsiaka, nefa afaka mivonto amin'ny lakaoly, tsy afaka amin'ny solvent solika, mora ...
Ny agar ny fanafody Fujian Global Ocean dia mampiasa Gelidium toy ny akora, nalaina tamin'ny fomba sarotra kokoa sy ara-tsiansa, izay tena ilaina amin'ny fanaovana fambolena biolojika. Ny tombam-pitsaboana agar-dranomasina Fujian eran-tany dia manana tombony amin'ny mari-pana gelling ambany, mangarahara tsara, tsy misy rotsakorana, sns.. Mandritra ny fambolena biolojika, ny agarà ho toy ny mpitsoka coagulateur tsara dia afaka mamindra ny medium bakteriaolojika mivaingana ho lasa medium na bakteriaolojika mivaingana. –Kolontsaina bakteria ...
Agar, antsoina hoe agar-agar, dia karazana polysaccharide iray avy amin'ny gracilaria sy ahidrano mena hafa. Noho ny famolavolana gel manokana sy ny toetrany mahasalama, dia be mpampiasa amin'ny sakafo, fanafody, indostria simika ary biolojika isan'andro. Miorina amin'ny agar izay ara-dalàna, Fujian Global Ocean Biotechnology Co, .Ltd dia mamokatra agar-pototra mora levona haingana miaraka amin'ny teknolojia siantifika. Izy io dia manana ny toetran'ny solubility tsara kokoa amin'ny maripana ambany sy ny hafainganana haingana kokoa, afaka ...
Semi nanadio Carrageenan
Ny karanajika kappa ranomasimbe eran-tany dia amboarina amin'ny ahidrà mena - Eucheuma, avy amin'ny ɑ (1-3) -D-galactose-4-sulfate ary β (1-4) 3,6-tsy fahampian-drano-D antsasaky ny vondrona lakrôly sulfate misy lactose . Ny vokatra dia voahodina ara-tsiansa ary ny kalitaon'ny vokatra dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra sinoa nasionaly sy EU. Toetoetra simika ● Fahafoanana: tsy voarohirohy amin'ny rano mangatsiaka, nefa afaka mivonto amin'ny lakaoly, tsy azo ovaina amin'ny solvent solika, mora levona amin'ny mafana ...